'हल्लाकै भरमा इन्सुरेन्स कम्पनीमा लगानी गर्नेहरु यसरी डुब्ने भए' दुर्गा प्रसाद काफ्लेको विश्लेषण
ARCHIVE, MARKET WATCH, SHARE MARKET » 'हल्लाकै भरमा इन्सुरेन्स कम्पनीमा लगानी गर्नेहरु यसरी डुब्ने भए' दुर्गा प्रसाद काफ्लेको विश्लेषण
दुर्गा प्रसाद काफ्ले
बिमा ऐनको प्रस्तावित मस्यौदामा राखिएको बिमा कम्पनीहरूको चुक्ता पुँजीको सीमा हटाइने भएपछी हल्लाकै भरमा सेयर किन्नेहरुको हालत अव के होला भन्ने कुरा मैले प्रष्टाईरहनु नपर्ला । सेयर बेच्नकै लागि केहि तस्करहरुले चलाएको हल्लाको पछी लागेर इन्सुरेन्समा लागानी गर्नेहरु टाँट पल्टिने त भएका छन् नै, त्यो भन्दा ठुलो कुरा, 'सेयर बजारमा हल्लाको भरमा लगानी गर्नुहुन्न र दुर्गा प्रसाद काफ्लेले पनि नसोची बोलेको हुँदैन भन्ने कुरा अझ प्रष्ट भएको छ ।
मस्यौदाको दफा ४० कम्पनीहरूको न्यूनतम चुक्ता पुँजी सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको थियो तर त्यसको निर्णय भएको थिएन । जसका कारण सेयर बजारमा बिमा कम्पनीहरूको सेयर मूल्य उच्च दरले बढेको थियो । यसरी मस्यौदा तयार गर्दा नै सेयर बजारका केहि तस्करहरुको मिलेमतोमा गरिएको थियो भने त्यतिबेला नै, सेयरको भाउ बढाउने, आफु बेचेर कामाउने अनि सानालाई फसाउने योजना थियो ।
मैले यस विषयमा बोल्दा मेरो धेरै बिरोध पनि भएको थियो । तर सत्य एक हुन्छ, र तीतो हुन्छ भनेजस्तै मैले इन्सुरेन्स कम्पनीमा लगानी नगर्नु भनेको कुरा सत्य सावित भएको छ । यस अघिको बिमा ऐनअनुसार जीवन बिमा कम्पनीहरूको चुक्ता पुँजी २५ करोड र निर्जीवन बिमा कम्पनीहरूको चुक्ता पुँजी १० करोड तोकिएको थियो । तर, पछि समितिले जीवन बिमा कम्पनीलाई ५० र निर्जीवन बिमा कम्पनीहरूलाई २५ करोड रुपैयाँ पुर्याउन निर्देशन दिएको थियो ।
त्यो सबै चालवाजी थियो । यता नियम बनाएजस्तो गर्ने उता आफु कमाउने धन्दा थियो । अब यी सेयरहरुको मूल्य कति होला ? थारो गाईले दुध दिन्छ भन्ने सोच्नुनै मुर्खता थियो । बर्षौंदेखि एजीएम गर्न नसक्नेहरुको हालत अव के होला ? साना लगानीकर्ताहरु त फसे नै, यसको जवाफ सम्बन्धित निकायले दिनुपर्छ । राइटकै भरमा लगानी गर्नेहरुको बिल्लीबाठ हुने निश्चित छ । यसको जिम्मा कसले लिने ।
बैंकले बढी ब्याज दिइरहेको छ । इन्सुरेन्स कम्पनीको सेयरको भाउ घट्ने निश्चित भएको छ । त्यसैले मैले भन्ने गरेको 'बजार १२०० मा आउँछ' भन्ने कुरा सत्य सावित हुने भएको छ । कुरा सुन्नु सबैको भन्छन्, मेरो कुरा न्सुन्नेहरु फसेकै हुन् । बाँकी त तपाईंहरुकै मर्जी !
प्रकाशित : Sunday, January 29, 2017